Iye zvino masango ose anozorora-amanotsi uye anotumira mameseji kudhinda
Iye zvino masango ose anozorora-manotsi uye kunyora
Iye zvino masango ose anozorora-mavara
Mukuru wacho mwana anova, anonyanya kuda kushandisa inzwi rake pachake nokuteerera kuimba uye mumhanzi. Saka kuongorora hakufaniri kuitwa kwete kungovata chete, asiwo zvekuvaraidza.
Sheet music and text Now mahlathi ose ari kuzorora
Vana havasi ivo vanoda zviridzwa zvemimhanzi kuti vaite mimhanzi. Zvose zvinokambaira, zvinokanganisa kana kuita mamwe manzwi zvinoshandiswa. Inzwi rako pachayo rinoshandiswa zvakare. Asi kuti uve nechokwadi chekuti chirevo chacho chinenge chakanaka chakanaka, unogamuchirwa kudhindisa mwana wedu-anofarira kugadzirirwa template nemanyoti uye kunyorwa kweraery rhyme. Vana vaduku vanogona kupeta mashizha nemanyoti uye kunyora zvakare zvakare!
Iye zvino masango ose ari kuzorora,
Mombe, vanhu, maguta neminda,
inorara pasi rose;
asi iwe, pfungwa dzangu,
kumusoro, pamusoro, unofanira kutanga,
iyo inofadza Musiki wako.
Uripi, iwe zuva, wakagara?
Usiku hwakakubudisa iwe kunze,
usiku, muvengi wezuva.
Dharai ikoko; rimwe zuva,
Jesu wangu, mufaro wangu,
kunyange kujeka mumoyo mangu kunoratidzika.
iyo yakaveredzwa nyeredzi inobwinya
Saka ini ndichamira,
apo zita rangu richaenda
mwari wangu kubva mumupata uyu wemisodzi.
Muviri unomhanyira kuti ugare
unobvisa nguo uye shangu,
Ndinotora izvozvo, zvinopesana nazvo
Kristu achandipa mari
mupendero wekubwinya nekubwinya.
Musoro, tsoka uye maoko
vanofara kuti ikozvino kusvika kumugumo
basa riri kuuya.
Mwoyo, fara, iwe uchava
kubva pakutambudzika kwepasi pano
uye kushanda pasina zvivi.
Zvino chienda, iwe unopera simba,
enda ugare pasi,
iyo mibhedha yaunoda.
Pane maawa uye nguva,
nokuti iwe uchagadzirira
kuzorora mubhedha muduku panyika.
Maziso angu anorwadza,
pasina nguva iyo yakavharwa.
Ndepi muviri uye mweya ipapo?
Mutorei kumatambudziko enyu
Iva akanaka kune vose vanokuvara,
iwe ziso uye chengeta Israeri '.
Pasi pose pamapapiro ose,
Jesu, mufaro wangu,
uye tora mwana wako muduku.
saka ngirozi ngadziimbe:
"Mwana uyu haafaniri kunge asina kuvhiringidzwa."
Kunyange iwe, vangu vangu,
haafaniri kusuruvara nhasi
hapana ngozi kana ngozi.
Mwari akakurega iwe kurara uchifara,
fungidzira zvigadziriswe zvombo
akapoteredza mubhedha nengirozi dzake boka.
Mhemberero dzinobva muimba inochengetedza Ikozvino, masango ose anozorora semafuta ane mafirimu akazaruka